. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: May 2011
ရေးသားသူ မိုးခါး at 5/21/2011 12:27:00 AM 12 comments:
ရေးသားသူ မိုးခါး at 5/11/2011 12:23:00 AM 8 comments:
မဟာကျိန်သစ္စာရှင်ဘုရားကြီးကို တည်ထားတဲ့ ဘုန်းဘုန်း ပုံတူရုပ်ထုပါ ..
ဘုရားကြီးရဲ့ အတွင်းပိုင်း (ပြုပြင်ဆဲ ကာလ)
ဒီပုံတော်အတိုင်း ဆင်းတုတော် အကြီးကို ထုလုပ်ထားတာလို့ သိရပါတယ် ..
ဆရာတော်ကြီး ပုံတူ ..
ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက ရောက်ခဲ့တဲ့ မြောက်ဥက္ကလာနားက ဘုရားကြီးပါ .. မဟာကျိန်သစ္စာရှင် ဘုရားကြီးလို့ ခေါ်ပါတယ် .. ဥာဏ်တော် အမြင့် ၁၀၈ ပေ မြင့်ပါတယ် .. မိုးခါး ရန်ကုန်ရောက်တုန်းက အပေါ်က ပုံတွေအတိုင်း အကြမ်းထည်ပဲ ပြီးပါသေးတယ် .. ကြားမိတာကတော့ အိပ်မက်အရ ဒီဘုရားကြီးကို တည်တာလို့ ကြားပါတယ် ..
ဟိုနေ့က အိမ်ကို သတိရလို့ မေးကြည့်တော့ ဘုရားကြီး တည်နေတာ တော်တော်ပြီးစီးနေပြီလို့ သိရပါတယ် .. အဲဒါနဲ့ အိမ်ကို အပူကပ် ဓါတ်ပုံအတင်းရိုက်ခိုင်းပြီး ဘလော့ဂင်းတော့တာပါပဲ .. :D (မဖူးရသေးတဲ့သူတွေ ဖူးစေချင်တဲ့ စေတနာပါ :P)
ဆ၇ာတော်ဘု၇ားကြီးကို အဓိဌာန်ဆ၇ာတော်ကြီးဆိုပြီး လူသိများပါတယ်။ ၇ခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ မှဖြစ်ပါတယ်။ ဆ၇ာတော်ဘု၇ားကြီးထံတွင် သစ္စာဆိုပြီး ဆုတောင်းပါက ဆုတောင်းပြည့်ပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ မကြာခဏ ကြွေ၇ာက်လာတတ်ပါတယ်။ မေလ ၇ ၇က်နေ့ က စင်္ကာပူနိုင်ငံမှတဆင့် အမေ၇ိကန်နိုင်ငံသို့ ကြွချီသွားပါတယ်။ အမေ၇ိကန်နိုင်ငံတွင် ၀ါဆိုပါမည်။
(စာဖတ်သူတဦးမှ ဖြည့်စွက်ပြောပေးသွားတာပါ .. ခုလို သိရလို့ စာဖတ်သူကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ရှင် ..း))
ရေးသားသူ မိုးခါး at 5/09/2011 09:18:00 PM 12 comments:
တခုခုနဲ့ ဖွင့်ဖို့တော့ လိုပြီ ..။
အလင်းကို ဘယ်မြင်လိမ့်မလဲ ..။
အလင်းနဲ့ အလှကို ခံစားဖို့
စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ မျက်ဝန်းတွေ ရဲရဲဖွင့်ကြည့်ပါ ..။
သူ့အလုပ်နဲ့ သူပျော်နေတဲ့ နေ့နဲ့ ညကို ..။
ရေးသားသူ မိုးခါး at 5/08/2011 02:35:00 AM7comments:
စာမရေးပဲ အပျင်းထူနေပြန်ပါပြီ .. :D
အဲဒါကြောင့် စာရေးဖို့ အရှိန်ပြန်ယူရင်း ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက နေပြည်တော်ကိုလည်း ရောက်တုန်း ရွှေတိဂုံပုံတူ ဘုရားကြီးထဲက ပန်းပုပုံတွေကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဘုရားရဲ့ ဇာတ်တော်တွေကို ထွင်းထုထားတဲ့ပုံတွေက အတော်လေး လက်ရာမြောက်ပါတယ် ..
ဆင်ဖြူထားတဲ့နေရာကိုလည်း သွားခဲ့ပါသေးတယ် .. ဒါပေမယ့် ရောက်တဲ့အချိန်က ဆင်တွေ အနားယူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ မမြင်ခဲ့ရပါဘူး ..း))
ရေးသားသူ မိုးခါး at 5/01/2011 12:14:00 PM7comments: